Anosibe-Antananarivo Manjaka ny havoretrana sy tsy fifanajana
Minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka Hanafaingana ny fomba fiasa ny teknolojia avo lenta
Fifanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa tamin’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka sy ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana (OMS) mandritra ny 3 taona no notanterahina tetsy Ambohidahy omaly.
Antananarivo Renivohitra Mandroso ny asa fanamboaran-dàlana sy làlankely
Mandroso ny asa fanamboaran-dalana sy lalankely ao Betafo Ambohimandroso sy Ambodivonkely boriborintany faha-6;
Tetikasa 930 Hiatrehana ny loza voajanahary
Notoloran’ny Fondation Telma fitaovana manaraka ny toetrandro ny fikambanana Medair hanampy amin’ny fanatanterahana ny tetikasa 930 izay ahafahana manaitra mialoha ny olona raha sendra tojo loza voajanahary.
Farihin’Anosy Efa tsy matahotra intsony ny mpanarato
Tsy tahotra tsy henatra ny an’ireo olona manarato etsy amin’ny Farihin’Anosy toerana hivarinan’ny rano maloto avy amin’ireo faritra manodidina azy eto Antananarivo.
Fiahiana ara-tsosialy CNaPS – SASS Notohizana tany Andapa ny fampiofanana
« Aoka ny hasasarany ho azony araka ny fifanarahana », hoy ny inspecteur de travail Randrianarijaona Charles Emilson lehiben’ny sampandraharaha SASS (na service d’Action Sanitaire et Sociale) eo nivon’ny CNaPS tao Andapa tamin’ny fanombohana ny fampianarana momba ny Lalànan’ny Fiahiana ara-tsosialy.
Tale jeneralin’ny UNICEF “Tandindonin-doza ny ankizy maneran-tany”
Tao anatin’ny taratasy misokatra miantefa amin’ny ankizy maneran-tany no nambosahan’ny Tale jeneralin’ny UNICEF Sampandraharaha iraisam-pirenena miaro ny zon’ny ankizy, Rtoa Henrietta H.
Fikambanana FILEFA “Tsy mpisoloky izahay fa mijoro ara-panjakana”
Nanambara ny olana nosedrainy tany Moramanga, tamin’ny faran’ny herinandro teo ny filohan’ny FIkambanan’ireo olona LEo ny FAhantrana (FILEFA) Atoa Razafindrakoto Gérard, omaly.
Samy manao izay saim-pantany, ary toy ny tany tsy misy lalàna amina toerana maro eto an-drenivohitra, tahaka ny etsy Anosibe.
Fifamoivoizana mikorontana, sarety mibahana sy manelingelina, tatatra lasa fanariana poti-kanina sy rano maloto, indrindra fa ny fako. Tsy tahotra tsy henatra ny fanaovana maloto an-dalambe. Olombelona no misokitra sy manadio ireny fako sy maloto ireny fa tsy sanatria biby. Tsy tonga saina anefa ireo olona efa zatra gaboraraka. Mba vita tsara ihany ny fotodrafitrasa satria fotaka mandrevo ny teny fahiny, saingy tsy misy fanajana ireo fananana iombonana ireny. Ny mpitondra hatrany no mahazo tsiny. Rehefa dinihina dia toa ny Malagasy mihitsy no sakana amin’ny fandrosoana. Mila fanabeazana sy fahatongavan-tsaina, saingy toa miandry andrasana tahaka ny omby vao hanara-dalàna sy hikolo sy hanaja ny tontolo manodidina. Ny fitaizana tsy ampy, ny olona zatra gaboraraka, mpitondra mety tsy ampy fandraisana andraikitra. Sanatriavina, toa ny biby indray no mahay miara-miaina sy mitsinjo kokoa ny manodidina azy. Mila fahatongavan-tsaina !